ဘာကြောင့်သွေးထွက်သံယိုတစ်ခုခုထိခိုက်မိတာနဲ့ ATT ကိုထိုးခိုင်းကြတာလဲ? -
လူတိုင်း တစ်ခုခုထိခိုက်မိလို့ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်တိုင်းမှာ ATT ဆိုတဲ့ဆေးထိုးဖူးကြပြီး ATT နဲ့မစိမ်းကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ATT ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာကြောင့်ထိုးရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာများကို ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ATT ရဲ့အရှည်ကတော့ anti-tetanus toxoid ပဲဖြစ်ပြီးတော့ မေးခိုင်ပိုးကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ မေးခိုင်ရောဂါဟာ Clostridium tetani ဆိုတဲ့ဘတ်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခိုင်ရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့ colstridium tetani ရဲ့ ဥတွေဟာ မြေကြီးတွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေမှာရှိနေတတ်တာကြောင့် နေရာတော်တော်များများမှာရှိတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီဥလေးတွေဟာ oxygen မရတဲ့နေရာမှာ ဘတ်တီးရီးယားအဖြစ်ပေါက်ဖွားတတ်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာ ၎င်းဥများဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားပြီး အနာနက်လို့ oxygen မရတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘတ်တီးရီးယားအဖြစ်ပေါက်ဖွားပြီး ဒုက္ခပေးကြတာပါ။ မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်သွားပြီဆိုရင် ကုသဖို့နည်းလမ်းလုံး၀မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရောဂါမဖြစ်ခင်မှာ ထိခိုက်မိတာနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးကာကွယ်တာပဲလုပ်နိုင်တာကြောင့် သွေးထွက်သံယိုထိခိုက်မိတာနဲ့ ATT ထိုးခိုင်းကြတာပါ။
မေးခိုင်ရောဂါခံစားရတဲ့လူနာတွေမှာ ဘယ်လိုရောဂါလက္ခဏာတွေ တွေ့ရတတ်လဲ?
ရောဂါပိုး အနာကနေတဆင့်ဝင်သွားတဲ့လူနာတွေမှာ ၃ရက်ကနေ ၂၁ရက်အတွင်းမှာ ရောဂါလက္ခဏာတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်၊ အများအားဖြင့်တော့ ၁၄ရက်အတွင်းမှာ :-မေးရိုးတစ်လျှောက်တောင့်တင်းလာပြီး ပါးစပ်ဖွင့်ဖို့ခက်ခဲလာတာ
အစာမြိုချဖို့ခက်ခဲလာတာတက်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အဖျားတက်လာတာ၊ သွေးပေါင်ချိန်အပြောင်းအလဲဖြစ်လာတာ၊ နှလုံးခုန်မြန်လာတာ
မွေးကင်းစကလေးများနဲ့ မေးခိုင်ရောဂါပိုးလူတိုင်းအသက်အရွယ်မရွေးမှာ မေးခိုင်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပေမယ့် မေးခိုင်ရောဂါပိုးက မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ မီးဖွားပေးတဲ့မိခင်တွေမှာပိုတွေ့ရပြီး ပိုမိုလဲပြင်းထန်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မီးဖွားအပြီး ၆ပတ်အတွင်းမိခင်တွေမှာဖြစ်နိုင်ပြီး မွေးကင်းစကလေးတွေမှာတော့ ၂၈ရက်အတွင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ချက်ကြိုးဖြတ်တဲ့အခါမှာပိုးသတ်သန့်စင်ထားသောကိရိယာများကိုသာအသုံးပြုဖို့နဲ့ မီးဖွားမယ့်မိခင်များကို ATT ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
prevention is better than cure ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ကာကွယ်ခြင်းက ကုသခြင်းထက်ပိုမိုသာလွန်တာကြောင့် မတော်တဆသွေးထွက်သံယိုဖြစ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ ATT မေးခိုင်ပိုးကာကွယ်ဆေးကို မမေ့မလျော့ဘဲထိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မေးခိုင်ရောဂါဟာ ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကုသဖို့ဆေးခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အပ်သေးသေးလေးစူးတာ၊ သံစူးတာလေးပဲ၊ အနာသေးသေးလေးပါဆိုပြီး ပေါ့ဆမနေဘဲ မတော်တဆသွေးထွက်သံယိုဖြစ်လို့ အနာနက်တယ်ဆိုရင် ATT ကာကွယ်ဆေးကို ထိုးပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။